SPY378 - Mobile Phone Dock Charger Wifi 4K Kamera miafina miafina (stock azo amin'ny 25 Aog) - OMG Solutions
SISTEMA MIASA - Charger dock miasa tanteraka miaraka amin'ny mpampitohy USB micro ho an'ny famahanana sy ny fampifanarahana amin'ny fitaovana iPhone.
Ity charger docking finday ity dia miasa tanteraka, saingy miaraka amina fihoaram-pefy dia fakantsary mpitsikilo miafina ao anatiny ihany koa izy io, iray manana fahaiza-manao WiFi izay ahafahanao mandefa horonantsary mivantana ny ankamaroan'ny fitaovana marani-tsaina. Mba hanaovana izany dia ampidino fotsiny ny fampiharana maimaim-poana amin'ny telefaoninao ary ampifandraiso amin'ny fakantsary WiFi ny fakan-tsary, ary vonona ianao handefa horonantsary horonantsary HD 1080p feno. Ambonin'izany, manana sensor mihetsika ao anatiny izy izay handefa fampandrenesana eo noho eo amin'ny app anao. Izy io aza dia manohana karatra SD hatramin'ny 128GB ny habeny. Fanampin'izay, rehefa misy ny fanetsehana ny fandraisam-peo mihetsika dia hahazo mailaka sy lahatsoratra manaitra anao amin'ny hetsika ianao. Ny fiasan'ny DVR dia manana endri-tsoratra tafahoatra izay manindry azy avy hatrany ireo rakitra tranainy indrindra amin'ireo vaovao rehefa feno ny karatra SD. Ity fakantsary miafina ity dia tsy ho diso toerana amin'ny trano sy birao ary afaka mameno ny telefaona findainao rehefa any an-trano ianao na misambotra hetsika tsy ilaina rehefa tsy eo ianao.